११ महिनामा २० को हत्या- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
धेरैजसो घटनामा आरोपित आफन्त नै छन्, कतिपय पक्राउपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने कतिपय फरार रहेकाले प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्
मंसिर २६, २०७६ अवधेशकुमार झा
(राजविराज) — सप्तरीमा पछिल्लो ११ महिनामा २० जनाको हत्या भएको छ । मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राजविराजमा इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा हत्याका अधिकांश घटनाका आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
सुरुंगा नगरपालिका–६ कडरबोनाका ३० वर्षीय दीपेन्द्र चौधरीको ०७५ माघ ९ मा रुपनी–१ मा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । प्रहरीमाथि गोली चलाउँदा गरिएको जवाफी कारबाहीमा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको थियो । चौधरीका परिवारले भने नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले उनको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
बलान बिहुल गाउँपालिका–४ बेल्हीकी १६ वर्षीया सरिताकुमारी बडहीको गत माघ १४ मा हत्या भएको थियो । पक्राउ परेका आरोपित उनका बुबा तुरुन्तलाल फागुन ११ देखि पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा छन् । अर्का आरोपित आमा ४३ वर्षीया पवनदेवी बडही फरार छिन् ।
खडक नगरपालिका–५ खरचुहियाका ७५ वर्षीय सबुरी साह र उनकी पत्नी ६५ वर्षीया बेचनीदेवी साहको शव डढेको अवस्थामा गत फागुन १४ मा फेला परेको थियो । दुवैको हत्यापछि शव डढाइएको शंका गरे पनि घटनामा संलग्नको अझैसम्म पहिचान भइसकेको छैन । डाकनेश्वरी नगरपालिका–३ तरहीकी ३५ वर्षीया ललितादेवी साहको ०७५ माघ १२ मा हत्या भयो । आरोपित ससुरा ६८ वर्षीय रामदेव साहलाई वैशाख १९ मा प्रहरीले पक्राउ गरयो । जेठ १५ मा पुर्पक्षका लागि तारेखमा रिहा भए । फरार भनिएका आरोपित पति ४० वर्षीय शंकर साह र देवर ३५ वर्षीय राजकुमार भनिने राजीवप्रसाद साह प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् ।
हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिका–१४ का ६५ वर्षीय जगदीश रामको गत वैशाख २१ मा हत्या भयो । उनकै माइला छोरा ३२ वर्षीय देवकुमारले हत्या गरेको किटानी जाहेरी पर्‍यो । आरोपित अझैसम्म फरार छन् । तिरहुत गाउँपालिका–२ गोइठी घर भई राजविराजको पिस जोन मोडेल स्कुलमा पढाउने २५ वर्षीय भट्टराई भनिने जयकृष्ण बिराजीलाई असार ९ को राति राजविराज–७ खर्साल टोलमा आठ जनाको समूहले कुटपिट गरेको थियो । उनको असार ११ मृत्यु भयो । घटनामा संलग्न भनिएका कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । सुरुंगा–१ चहकाकी ६४ वर्षीया धनमाया पुलामीलाई असार १९ मा उनकै छोरा ३४ वर्षीय रिठ्ठे भनिने जंगबहादुरले हत्या गरे । पक्राउपछि उनी साउन ९ देखि पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा छन् ।
सिरहाको गोलबजार नपा–९ चन्द्रोदयपुरका १२ वर्षीय मोहमद तरिक शेख, ३ वर्षीय आसिलम शेख र २ वर्षीया आजमिन खातुन असार २० मा मृत फेला परे । हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएकी आमा ३५ वर्षीया रुक्साना खातुन साउन १५ देखि पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा छिन् । आत्महत्याको दुरुत्साहनको अभियोगमा पक्राउ परेका उनका पति तैयव राइनलाई जिल्ला अदालतले ७० हजार धरौटी लिई तारेखमा रिहा गरेको छ । रुक्साना बच्चाहरू लिएर कोसी ब्यारेजमा हाम फालेकी थिइन् । उनी बाँचिन, छोराछोरीको मृत्यु भएको थियो ।
हनुमाननगरकी २५ वर्षीया हीरादेवी मण्डल झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । गत असार २७ को साँझ उनका पति बैजनाथ मण्डल, ससुरा उमा मण्डल र सासू लक्ष्मीदेवी मण्डलले हत्या गरेर आत्महत्या देखाउन पासोमा झुन्ड्याइएको भन्दै पिता विष्णुपुर गापा–४ सिम्राहा सिग्यौनका बुधाइ मण्डलले असार २९ मा प्रहरीमा उजुरी दिए । दाहसंस्कारका लागि शव लैजाने क्रममा विवाद भएपछि बैजनाथलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरी बैजनाथलाई त्यसै छाडेको आरोप हीरादेवीका माइती पक्षले लगाउँदै आए पनि आरोपितले हत्या नभई आत्महत्या गरेको बताउँदै आएका छन् । मधुपट्टी कनकपुरकी १८ वर्षीया पुनम यादवलाई असार ३० मा उनका पति २० वर्षीय सतीशकुमार यादव, ससुरा रामसिमृत, सासू रामसखी र जेठानी किरणले हत्या गरेको भन्दै दाजुले साउन २ मा इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनामा उजुरी दिए । प्रहरीले साउन १३ मा सतीशलाई पक्राउ गर्‍यो । पीडितले विष सेवन गरी आत्महत्या गरेको बताउँदै आएका सतीश एक लाख धरौटीमा रिहा भए ।
अग्निसाइर कृष्णसवरण गापा–३ हरिहरपुरकी १९ वर्षीया गर्भवती रञ्जुदेवी यादवलाई साउन ५ मा हत्या गरेको आरोपमा घटनाको दुई सातापछि सासू लीलादेवी र ससुरा महेन्द्र यादव पक्राउ परे । दुवै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । डाकनेश्वरी नपा–१ कविलासाकी २७ वर्षीया कञ्चनकुमारी यादवको साउन १८ मा हत्या भयो । पक्राउ परेका पति अरविन्दकुमार यादव भदौ २३ देखि पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा छन् । अन्य आरोपित पाँचजना पक्राउ परेका छैनन् । कञ्चनलाई हत्यापछि आत्महत्या देखाउन झुन्ड्याएको माइती पक्षको आरोप छ ।
बोदे बर्साइन नपा–४ की १९ वर्षीया अम्बिकाकुमारी साहलाई असोज १९ मा पति रामचन्द्र साह, देवर रामप्रसाद र सासू किसनीदेवीले पासोमा झुन्ड्याई हत्या गरेको भन्दै पिता शम्भुनाथ नपा–१२ कुशहाका चन्द्रकान्त साहले प्रहरीमा उजुरी दिए । प्रहरीले रामचन्द्र र रामप्रसादलाई असोज १९ मा पक्राउ गरे अभद्र व्यवहारको उजुरी दर्ता गरी कारबाही थाल्यो । महादेवा गापा–१ पकरी कुजराही टोलका ६२ वर्षीय मोहमद गफुर पमरियालाई असोज १९ मा पत्नी जमुनी खातुन र छोरा नइम पमरियाले हत्या गरेको भन्दै भाइ इसराइल पमरियाले प्रहरीमा उजुरी दिए । अदालतको आदेशमा जमुनी साधारण तारेखमा रिहा भइन् भने कात्तिक २० देखि नइम पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा छन् ।
बोदे बर्साइन नपा– ७ मानराजा बगबिराकी २५ वर्षीया राजोदवी यादवलाई असोज २६ मा पति विष्णुदेव यादव, उनकी जेठी पत्नी उषादेवी र विष्णुदेवका भतिजीबुहारी ममतादेवी यादवलगायतले हत्या गरेको भन्दै पिता सत्यनारायण यादवले प्रहरीमा उजुरी दिए । विष्णुदेवले विष खाएर सिकिस्त राजोदेवीको उपचारको प्रयास गर्दा गर्दै मृत्यु भएको बताएका छन् । कञ्चनरूप नपा–५ पिप्रा टोलका २३ वर्षीय अजयकुमार मुखियालाई कात्तिक १ राती सोही ठाउँका श्रीलाल सरदार, उनका छोरा विजय सरदार र बबरी भनिने रमेश सरदारलगायतले हत्या गरेको भन्दै पिता जनक मुखियाले प्रहरीमा उजुरी दिए । श्रीलाल र विजय पक्राउ परे, रमेश फरार छन् । अग्निसाइर कृष्णासवरन गापा–१ स्थित मुस्लिम टोलकी ३६ वर्षीया बुलु खातुनको कात्तिक १२ गते अपरिचित व्यक्तिबाट हत्या भएको भन्दै पति इनुस मियाँले कात्तिक १८ मा प्रहरीमा उजुरी दिए । घाँस काट्न निस्किएकी बुलुको शव महुली खोलाको पश्चिम कुलोमा कात्तिक १६ सडेगलेको अवस्थामा फेला परेको थियो । घटनाका आरोपितको पहिचान हुन सकेको छैन ।
राजविराज नपा–२ तेतरी गाछीकी १८ वर्षीया कोमल साफीको मंसिर ४ मा हत्या गरिएको शंकास्पद अवस्थामा घरमै शव फेला पर्‍यो । घरमा एक्लै रहेको अवस्थामा कोठाभित्र बिछ्यौनामा मृत अवस्थामा फेला परेकी साफीको घाँटीमा निलडाम थियो । घटनाको रहस्य खुलेको छैन ।
खडक नपा– १० का १५ वर्षीय सागर सरदारको मंसिर ८ मा हत्या गरेको आरोपमा स्थानीय शिवनारायण साह र ६ जना बालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले नियन्त्रणमा लियो । उनीहरूविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको उजुरी दर्ता गरेको छ । मंसिर ९ मा ७५ वर्षीया अनुरागीदेवी राजविराज नपा–६ मा कान्छा छोरा विनोद दासको घरमा मृत फेला परिन् । नाति दीपेन्द्र दासको उजुरीमा प्रहरीले शव पोस्टमार्टमका लागि धरानको बीपी प्रतिष्ठान पठाएको थियो । हत्या भएको र प्रहरीलाई जानकारी नदिई दाहसंस्कार गर्न थालेको भन्दै उजुरी परेको थियो । विनोदले भने मानसिक रोगी आमा कुर्सीमा चढेर छतमा उक्लिँदा लडेर मृत्यु भएको बताएका छन् ।
अधिकारकर्मी मनोहर पोखरेलले जिल्लामा भएका यी हत्याका घटनामध्ये अधिकांशका आरोपी फरार रहेको, केही घटनालाई आत्महत्याको रूप दिइएको भए पनि प्रहरी अनुसन्धानले प्रस्ट पार्न नसकेकाले जिल्लामा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै गएको आरोप लगाए ।
अनुसन्धानमा सीआईबी टोली
कपिलवस्तु – यहाँको पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित बुद्धभूमि नगरपालिका–२ गोरुसिंगेमा भएको एक जनाको हत्याको अनुसन्धान प्रहरीका लागि चुनौती भएको छ । गत मंसिर १३ मा धनराज पौडेलको शव विभत्स रुपमा हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । घटनाको दुई साता हुन लाग्दा पनि पनि संलग्नका बारेका तथ्यप्रमाण बाहिर आउन नसकेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली जिल्ला आएको छ ।
सीआईबीका निरीक्षकको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली जिल्ला आएको हो । उनीहरूले अनुसन्धान थालेका छन् । यसअघि उक्त घटनाको छानबिन गर्न ईप्रका गोरुसिंगेका निरीक्षक सुभाष खड्काको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन भएको थियो । अहिले दुवै टोलीले आआफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् ।
सीआईबी टोलीले घटनास्थलको निरीक्षण, परिवार, आफन्त र छिमेकीसँग सोधपुछ गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । उनीहरूले घटनाको प्रकृति र अवस्था, श्रीमान्/श्रीमतीको सम्बन्ध र घटनाका अन्य कुरालाई जोडेर अध्ययन थालेका छन् । हत्या आरोपमा मृतककी बुहारी लक्ष्मी पौडेल पक्राउ परेकी छन् । उनमाथि अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । उनले घटनामा आफू संलग्न नरहेको बताउँदै आएकी छन् । पौडेल आफ्नै घरको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । मंसिर १३ गते दिउँसो हत्या भए पनि प्रहरीले साँझ ७ बजे मात्र घटनाबारे थाहा पाएको थियो । हत्या लक्ष्मीले नै गरेको मृतकका परिवारको आरोप छ । घटनाका बेला दुबईमा रहेका मृतकका छोरा शंकरले बुबाको हत्या श्रीमतीको संलग्नता हुन सक्ने आरोप लगाए । घटना थाहा पाएर घर फर्केका उनले श्रीमतीले आफूसँग निहुँ खोज्ने र दिनहुँ झैझगडा गरिरहने गरेको गुनासो गरे ।
परिवारका अनुसार घटनाका दिन लक्ष्मी र मृतक पौडेल घरमै थिए । धारिलो हतियार प्रयोग गरेर पौडेलको हत्या भएको छ । प्रयोग गरिएको हतियारको फिङ्गर प्रिन्ट परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । उनको शव क्षतविक्षत अवस्थामा थियो । हत्यापछि लक्ष्मीले नै ससुरा हराएको र घरमा चोर आएको विषयमा प्रहरीमा जानकारी गराएकी थिइन् । मृतकका आफन्तले गरेको फोन नलागेपछि खैलाबैला मच्चिएको थियो । खोजबिन गर्दा पौडेल घरकै टीभी कोठामा वीभत्स हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएका थिए । शवलाई सिरक, ब्ल्याङ्केट ओढाइएको थियो । त्यही कपडाका बीचमा बुहारी लक्ष्मीको मोबाइलसमेत भेटिएको थियो ।
मंसिर १२ गते काठमाडौं जान हिँडेकी लक्ष्मी गोरुसिंगेमा रहेको एक होटलमा अर्कैका नाममा कोठा बुक गरेर बसेको भेटिएको छ । उनी होटलमा बस्दा अपरिचित पुरुष आएर भेटघाट गरेको बताइएको छ । ती पुरुषले लक्ष्मीका दुई वर्षीय छोरालाई समेत होटलमा ल्याएका थिए । स्टाफ नर्स पढेकी लक्ष्मीसँग पैसाका विषयमा श्रीमान् र परिवारसँग बारम्बार किचलो हुने गरेको थियो । छिमेकीहरूले घटनामा लक्ष्मीकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बताए । पौडेलको घाँटी, टाउको, पेट र शरीरका विभिन्न भागमा गम्भीर चोट थियो । उनी अर्घाखाँचीबाट बसाइँ सरेर गोरुसिंगे आएका हुन् । उनी हराएको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले खोजबिन गर्दा कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । ‘अनुसन्धान जारी छ,’ प्रहरी प्रवक्ता सुनिल मल्लले भने, ‘छिट्टै परिणाम निस्किने अपेक्षा गरेका छौं ।’
प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ १२:२८
मंसिर २६, २०७६ विनु तिम्सिना
(विराटनगर) — आमाभन्दा प्यारो सम्बन्ध अरू कोसँग होला ? अझ नवजात शिशु र बालबालिकाहरू त आमाबाहेक खासै अरूको काखमा जान समेत मान्दैनन् तर विराटनगरस्थित मानव सेवा आश्रममा उद्धार गरेर ल्याइएकी १० महिने शिशु सुम्निमालाई भोजपुर घर भएकी ३० वर्षीया शिवकुमारी राई चिन्दिनन् ।
आश्रममा दुवै आमाछोरी बस्दै आएका छन् । न त आमा छोरीप्रति स्नेह देखाउँछिन् न त छोरी नै आमाको काख खोज्छिन् । बरु सुम्निमा आश्रममै बस्दै आएकी मिलनरानो दाससँग खेल्ने रमाउने गर्छिन् । ‘छोरी भनेर न त आमा काखमा लिन्छिन् न त छोरी नै उनीसँग मान्छिन्,’ आश्रमका स्वयंसेवक नवराज केसीले भने, ‘आफ्नी आमासँग भन्दा आश्रममै बस्दै आएकी मिलन रानोसँग बढी नजिक छिन् नानी ।’
मिलन रानो पनि मानसिक रोगी नै हुन् तर पनि उनी सुम्निमालाई निकै माया गर्छिन् । ‘आफ्नै छोरीलाई जस्तै माया गर्नुहुन्छ दास दिदीले,’ केसीले भने, ‘एकैछिन छाड्न मान्नुहुन्न । दिउँसो त हामी पनि उहाँलाई नै दिन्छौं सुम्निमा तर राति भने मानसिक बिरामीको जिम्मामा दिँदा केही होला कि भन्ने डरले हामी आफैं राख्छौं नानीलाई ।’
भोजपुरको आमतेककी राई लामो समयदेखि मानसिक रोगबाट ग्रसित थिइन् । परिवारमा समेत अपांग दाजुबाहेक अरू कोही नभएपछि उनी भौतारिएर हिंड्ने गर्थिन् । धनकुटामा सामूहिक बलात्कारमा परेपछि उनी झन् अर्धचेत नै बनिन् । बलात्कारपछि जसोतसो भोजपुर पुगेकी उनले अर्धचेत अवस्थामा घरैमा छोरी जन्माएकी हुन् ।
बलात्कारबाट जन्मेकी छोरीसहित मानव सेवा आश्रमले भदौमा उनलाई उद्धार गरेर विराटनगर ल्याएको हो । सुम्निमाले नामसमेत मानव सेवा आश्रममै आएर पाइन् । ‘सुम्निमालाई कोकलेको बच्चो भन्नुहुन्छ शिवकुमारी दिदी,’ केसी भन्छन् ।
शिवकुमारी सबओभरसियरकी विद्यार्थी हुन् । पढ्दापढ्दै मानसिक अन्तुलन गुमाएकी उनको उद्धारका लागि छिमेकीहरूले २०७० सालमै पहल गरेको मानव सेवा आश्रमले बताए । त्यसबेला मानव सेवा आश्रम हेटौंडामा मात्रै सीमित भएकाले उद्धार गर्न भोजपुर जान सक्ने अवस्था नरहेकाले आफूहरूले आश्रमसम्म ल्याइदिन आग्रह गरेको उनले बताए ।
उनको उद्धारको पहल भइरहेकै बेला उनी घर छाडेर बेपत्ता बनिन् । ‘उनी घर छाडेर हिँडेकाले उद्धार गर्दिनुस् भन्ने उनका छिमेकीहरू पनि सम्पर्कमा आएनन्,’ केसीले भने, ‘हेटौंडादेखि उद्धार गर्न भोजपुर जान हाम्रो पनि स्रोतसाधनले भ्याएन, त्यसैले त्यो बेला उनको उद्धार गर्न सकिएन ।’
मानसिक अवस्था ठीक नभएपछि उनी धेरै ठाउँ भौंतारिएर हिंडिन् । धनकुटामा सामूहिक बलात्कारमा पनि परिन् । बलात्कारपछि जन्मिएकी छोरीलाई कहिले जंगलमा छाड्ने, कहिले भोकै राख्ने गरेको देखेर स्थानीयहरूले मानव सेवा आश्रममा सम्पर्क गरेपछि आफूहरूले उद्धार गरेर ल्याएको बताए । आश्रममा ल्याएपछि पनि उनले आफ्नी छोरीलाई चिन्न सकेकी छैनन् ।
एक महिनाअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले उद्धार गरेर मानव सेवा आश्रमको जिम्मा लगाएको मोरङ रतुवामाई नगरपालिका ८ दाम्राभिट्टाका ४६ वर्षीय दिनेश तिम्सिनामा सुधार आइरहेको छ । विगत ३० वर्षदेखि मानसिक सन्तुलन गुमाएका उनी उपचार अभावमा डोरीले बाँधिएर जीवन बिताइरहेका थिए । सानैमा बुबा बितेको र आमा सुस्त श्रवणशक्ति भएका कारण उनको समयमा उपचार हुन नसक्दा उनले बन्दी जीवन जिउनुपरेको थियो ।
तिम्सिना सुरुका दिनमा पढाइमा निक्कै अब्बल थिए । झापाको जुरोपानीमा रहेका मावलीमा बसेर पढ्ने उनी एसएलसीमा फेल भएपछि भने मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेका थिए । समयमै उपचार नपाउँदा उनी लामो समयदेखि साङ्लामा बाँधिएर बस्न बाध्य थिए । बसेकै ठाउँमा दिसापिसाब गर्ने उनी मानव सेवा आश्रममा नियमित उपचार र औषधि सेवनबाट शौचालय जान सक्ने भएको बताए ।
उनीहरूसहित हाल आश्रम विराटनगरमा १६ जना मानसिक रोगी बस्दै आएका छन् । मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. निमेष राजभण्डारीले उनीहरूको नियमित जाँच गरिरहेका छन् । कोही पनि सडकमा बस्नु नपरोस्, खासगरी मानसिक सन्तुलन गुमाएर परिवार र समाजबाट अपहेलित भई सडकमा जीवन गुजारा गर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हेटौंडाबाट सुरु भएको मानव सेवा आश्रम हाल सात वटा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।
आश्रमले हालसम्म ६ सय ५० जना मानसिक रोगीलाई उपचारपछि परिवारमा पुनर्मिलन गराएको केसीले बताए । आश्रमले विभिन्न जिल्लामा हाल ८ सय जनालाई सेवा दिइरहेको उनले बताए साथै एक सय ५० जनालाई आश्रममा अल्पकालिक सेवा दिइरहेको उनले जनाए ।
प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ १२:२५